युगसम्बाद साप्ताहिक - प्रचण्डलाई नेपाली कांग्रेसबाट एउटा प्रलोभन दिइएको छ - मुमाराम खनाल, राजनीतिक विश्लेषक
Monday, 12.09.2019, 10:05am (GMT+5.5) Home Contact
प्रचण्डलाई नेपाली कांग्रेसबाट एउटा प्रलोभन दिइएको छ - मुमाराम खनाल, राजनीतिक विश्लेषक
Monday, 12.24.2012, 06:30pm (GMT+5.5)
० सहमतीय सरकार गठनका सवालमा पछिल्लोपटक एकीकृत नेकपा माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्ड र प्रधानमन्त्री डा। बाबुराम भट्टराईबीच उत्पन्न विवाद तनावमा पुगेको छ भनिन्छ । माओवादीभित्र देखापरेको सत्ताको पछिल्लो खेलले कस्तो संकेत गरेको पाउनुहुन्छ ?
अहिले त प्रष्टै रुपमा डा बाबुराम भट्टराई सत्ताबाट बाहिरिन नचाहनुभएको देखिन्छ तर उहाँको बिरुद्धमा एक खालको राजनीतिक ध्रुवीकरण विद्यमान छ । त्यो ध्रुवीकरण उहाँको पार्टीभित्र पनि छ र बाहिर पनि छ । बाहिरको ध्रुवीकरण पनि सहमतीय सरकार गठनका लागि भट्टराई सरकार नै बाधक हो भन्ने कुरामा कहीं कतै पनि दुईमत भएको देखिन्न । यो सत्ता गठबन्धनले आगामी निर्वाचनको प्रक्रियालाई अबरुद्ध गरेको छ भन्ने कुरा नेपालको राजनीतिमा सबै एकमत छन् । त्यसैले अध्यक्ष प्रचण्ड पनि अब बाबुराम वा एमाओवादीमात्र एकातिर उभिएर यो ध्रुवीकरणलाई थेप्न सकिंदैन र पार्टीलाई कमजोर पार्नबाट रोक्न सकिन्न भन्ने निष्कर्षमा पुग्नभएको छ ।
० यसअघि प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिन्छु भन्दा अनेक बहाना बनाएर रोक्ने प्रचण्ड अहिले कसरी विपक्षीतिर लाग्नुभएको होला ?
यहाँ सबैले बुझ्न्पर्ने एउटा कुरा के हो भने प्रधानमन्त्री डा बाबुराम र अध्यक्ष प्रचण्ड असाध्यै महत्वकांक्षी र व्यक्तिवादी नेता हुनुहुन्छ । उहाँहरूले वस्तुगत परिस्थितिमा आएको परिवर्तन र उहाँहरूको आफ्नै कारणले अबरुद्ध भएको नेपालको लोकतान्त्रिक प्रक्रिया आदिलाई विश्लेषण गरेर भन्दा पनि आफ्नो महत्वाकांक्षालाई सम्बोधन गर्ने हिसाबले नेपाली कांग्रेस प्रस्तुत भएकाले यस्तो परिस्थिति विकसित भएको हो । कांग्रेसले प्रचण्डका केही महत्वाकांक्षा सम्बोधन गरिदिनेवित्तिकै अपारदर्शी वार्ताहरूमार्फत अब चाहिं बाबुराम भट्टराईलाई हटाउन सकिन्छ भन्ने ठान्नुभएको हो ।
यसअघि पनि प्रचण्डले डा बाबुराम भट्टराईलाई हटाउने कोसिस नगरेको भने होइत तर उहाँलाई के थाहा छ भने यो सरकार पार्टीको नियन्त्रणभित्र छैन । त्यसकारण यो सरकार पार्टीको नियन्त्रणभन्दा बाहिर छ भन्ने देखाउनासाथ भरखरै फुटेको पार्टी झनै कमजोर भएर जाने हुँदा यो सरकारलाई समर्थन गर्दै जाने रणनीति बनाउनुभएको हो । तर त्यो रणनीति यो हदसम्म पुग्यो कि अब नेपालको लोकतन्त्र र पार्टी दुबै बचाउन नसकिने अवस्था आएपछि उहाँले एउटा सम्झौता गर्नुभयो । प्रचण्डलाई प्रफु्ल्ल बनाउने त्यो सम्झौता बाहिर आइसकेको छैन ।
० त्यो भए प्रचण्डले कांग्रेस, एमालेसंग अपारदर्शी सम्झौता गरिसक्नुभएको हो ?
सम्झौता त गोप्य रुपमा नै ह्ने हो, नेताहरू टुँडिखेलमा बसेर सम्झौता त गर्दैनन् तर ती कुराहरू पारदर्शी ढंगले नेपाली जनतालाई अवगत गराइदैन । सम्झौता गर्दासम्म चुप राखिनु त ठिकै हो तर सम्झौता भैसकेपछि पनि त्यसलाई गोप्य नै राखिन्छ । जतिबेला कुनै एक पक्षले त्यो सम्झौता तोड्छ अनि मात्र नेपाली जनतालाई थाहा हुन्छ सम्झौता के भएछ र कसले तोडेछ भनेर । अपारदर्शी ढंगले गरिएको सम्झौताको कुनै मध्यस्थकर्ता पनि नहुनाले कसले गल्ती गरेको छ भन्न भेउ नै जनताले पाउँदैनन् ।
त्यसकारण अहिले प्रष्ट कुरा के देखिएको छ भने प्रचण्डलाई नेपाली कांग्रेसबाट एउटा प्रलोभन दिइएको छ । त्यो प्रलोभनले यदि मुलुकमा निकास निकाल्छ भने त्यसलाई जायज नै मान्नुपर्छ राजनीतिमा । मलाई के शंका छ भने प्रचण्डलाई राष्ट्रपति बनाउने आश्वासन कांग्रेसले दियो र डा बाबुराम नेतृत्वको सरकार हटाउन प्रचण्डजीले एउटा सम्झौता गर्नुभयो ।
० यदि त्यस्तो सम्झौता भएकै रहेछ भने त्यसले मुलुकको राजनीतिलाई दीर्घकालीन रुपमा सही दिशातिर अघि बढाउँछ कि केही समयका लागि मात्र ?
प्रचण्ड राष्ट्रपति हुने प्रक्रिया त धेरै पछिको हो । राष्ट्रपति एउटा निर्वाचनको प्रक्रियाबाट आउने हो त्यसकारण त्यो सम्झौता भएर निकास निस्कन्छ भने त ठिकै हो । अहिले लोकतान्त्रिक प्रक्रिया अबरुद्ध भएको भनेको निर्वाचन नभएर हो । एउटा निर्वाचनको अवधि सकियो, अर्को निर्वाचन भएको छैन । सरकारले घोषणा गरेको निर्वाचन पनि गर्न सकेन । सरकारले निर्वाचन गर्न नसक्नुमा सहमति भएन, अरुले साथ दिएन भनेर मात्र हुँदैन । सरकारले संविधानसभा विघटन गर्नुपूर्व दलहरूसंग कुनै सहमति गरेको थियो र अरु दलले सहयोग गर्नु । त्यसकारण अबरुद्ध भएको प्रक्रियालाई लिकमा ल्याउने भनेको निर्वाचनले हो र त्यो निर्वाचन केको हो भन्ने चाहिं दलहरूले सहमति गरेर निर्धारण गर्ने हो । यदि अर्को संविधानसभाको निर्वाचन गर्ने हो भने त्यसभन्दा अगाडिको कुनै सहमति र सम्झौताको केही अर्थ रहँदैन सबै संविधानसभाले नै गर्ने हो ।
मुख्य कुरा के हो भने प्रचण्डले सहमति गरेर अहिलेको प्रक्रियालाई केही अगाडि बढाउन खोज्नुभएको हो तर प्रधानमन्त्री डा बाबुराम भट्टराईले बरु पार्टी फुटाउन तयार छु तर सत्ता छाड्दिन भन्दै आफ्ना नजिकका मान्छेको भेला बोलाएर भनिसक्नुभएको छ ।
० एकीकृत नेकपा माओवादी अर्को एकपटक विभाजनको संघारमा पुगेको हो त ?
हो । यस्तो महत्वकांक्षी र व्यक्तिवादी चारित्रका मान्छेहरूको एउटा अर्को पनि चरित्र हुन्छ एकले अर्काको स्वार्थ सम्बोधन गरिदिएर अंकमाल गर्ने । प्रचण्डले बाबुरामको र बाबुरामले प्रचण्डको स्वार्थ पूरा गरिदिए भने “महान एकता भो” भन्दै जग हँसाउने काम गरेको हामीले चाँडै नै देख्न पाउँछौं । उहाँहरूबीच “नयाँ सिराबाट एकता हाँसिल ग¥यौं” भन्दै आजभोलि नै वक्तव्य नै पनि आउनसक्छ । यथार्थमा के हो भने उहाँहरूको व्यक्तिगत स्वार्थमा टकराव र समस्या समाधान नहुने अवस्थामा पुग्यो भने उहाँहरू पार्टी विभाजन गर्न तयार हुनुहुनेछ ।
० नेपालको राजनीतिमा एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड र प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई नेपाली राजनीतिको मूलधारमा रहेका छन् । यी दुईको चरित्र फरक फरक जस्तो पनि देखिन्छ । तपाईले त्यस्तो पाउनु भएको छ ?
बिल्कुल होइन । उहाँहरूको राजनीतिक धार एउटै हो । एउटै नभए २५ वर्षसम्मको सहयात्रा कसरी सम्भव हुन्थ्यो रु तर बाहिर भने प्रचण्ड र बाबुरामको राजनीति दुई धारमा छ भन्ने जस्तो देखिन्छ । यसमा दुई नेताको आआफ्नो स्वार्थ मिलेको छ । बाबुराम भट्टराईले पार्टी अध्यक्ष दावी गर्ने गर्नुभएको छैन र त्यो सम्भावना पनि छैन । तर दुर्भाग्यवश के भयो हामीले प्रचण्ड र बाबुरामलाई हेरेर पहिले नै दुईजना प्रधानमन्त्री हुने व्यवस्था गरिदिनु पर्ने थियो किनभने त्यस्तो व्यवस्था भएको भए उहाँहरूको विवाद हुने थिएन ।
दुर्भाग्य के भने प्रधानमन्त्रीको पद एउटा मात्रै छ र दुबैजना त्यहाँ पुग्न चाहनुहुन्छ । त्यसो हुनाले बाबुरामले पाएको पद सजिलै छोड्न चाहनुहुन्न । पार्टी सत्ता बाहिर रहँदा पनि उहाँहरू दुईमा सत्ता लिप्सा यति चर्को थियो कि जनयुद्धताका नै पनि पत्रिकामा एउटाको नाम आयो भने अर्को डाहाले भुतुक्कै हुने गर्दथे । उहाँहरूको व्यक्तिवादी चरित्र बडो अचम्मसंग प्रकट हुने गरेको छ । बाबुराम प्रचारको यति भोको कि तपाईं हामी सबैले देखेकै छौं । अहिले गाउँमा जाने काम पनि त्यसैको एउटा कडी हो । फेरि यससंगै उहाँ ‘म प्रचारको भोको छैन’ भनेर पाखण्ड देखाउनुहुन्छ । यस्तो खालको द्वैध चरित्र भएका मान्छेहरू पदका साह्रै बढी आकांक्षी तर बाहिर आदर्शका कुरा गर्ने र भित्र पदमा लडिरहने हुन्छन् ।
माओवादीभित्रको द्वन्द्वलाई बाहिर विचारका कुरा हुन् भन्ने गरिन्छ तर एमाओवादीमा विचार सिचार केही पनि छैन । विचार त पार्टीबाट बाहिरिसक्यो । अहिले झगडा प्रधानमन्त्रीमा मात्र हो । बाबुराम भट्टराई अझै धेरै समय प्रधानमन्त्री भैराखे भने बाबुरामको पनि बद्नाम भैराखेको छ र उहाँको वरिपरी बस्नेहरूको पनि बद्नाम भएको छ, लोकतन्त्र अबरुद्ध । यस्तो बेलामा प्रचण्डले निकास निकाल्न जुन पहल गर्नुभो त्यो त सकारात्मक नै छ ।
० तपाईंको विश्लेषणमा सहमति कायम गर्ने अहिलेको पहल मुलुकलाई निकास दिनेभन्दा पनि प्रचण्डको स्वार्थ पूरा गर्न नै हो भने त मुलुक झनु संकटमा फस्दैन र ?
हैन अब दुर्घटना वा पीडालाई कसरी बुझ्ने रु मुलुकले योभन्दा बढी पीडा अरु कति खप्ने भन्ने हो । मुलुकका लागि माओवादी पार्टी विभाजन भएको ठूलो दुर्घटना मान्ने कि लोकतन्त्र अबरुद्ध भएकोलाई ठूलो मान्ने रु एउटा पार्टीको तुलनामा लोकतान्त्रिक प्रक्रिया सिद्धिने अवस्थामा पुग्नु नै सबभन्दा ठूलो दुर्घटना हो । यति हुँदाहुँदै पनि नेपालको संक्रमणकाल ट्ंग्याउन नेपालका सबै राष्ट्रिय पार्टीहरू बलियो हुनुपथ्र्यो । राष्ट्रिय पार्टी कसरी कमजोर भयो, कमजोर बनाउने खेल कसले खेल्यो भन्दा त्यो खेल माओवादीले नै खेलेको हो । दर्भाग्यवश त्यो खेल उसको आफ्नै पार्टी जीवनमा आएको छ ।
० कतिपय राजनीतिक दलका नेताहरू अहिले माओवादीभित्रको यो विवाद पनि एउटा जालझेल मात्र हो, नौटंकी हो भनिरहेका छन् । यो सत्य हो ?
हैन, यो बिलकूल असत्य कुरा हो । नेपालका कम्युनिष्ट पार्टीहरूको संरचना र विकास क्रमलाई नबुझ्नेहरूको विश्लेषण हो । कस्तो हुन्छ भने कुनै पनि व्यक्तिवादी महत्वाकांक्षी मान्छेले आफ्नै जीवनको पनि र कुनै लोकतान्त्रिक प्रक्रियाको जीवनको संस्थागत जीवनमा विश्वास गर्दैनन् । माओवादी कुनै संस्थागत पार्टी पनि होइन । कहिले पनि संस्थागत जीवनमा उसले विश्वास गरेको पनि छैन । पार्टीभित्र जो बाधक हुन्छ त्यसलाई फकाउँदै, उसका कुरा सुन्दै एउटा व्यक्तिले निर्णय गर्ने पार्टी हो । तर प्रचण्ड र बाबुरामको उस्तै महत्वाकांक्षा भएकाले यी दुईजना नमिलीकन पार्टी निर्णय हुन गाह्रो थियो, त्यो यसभन्दा अघि पनि र अहिले पनि कायम छ ।
बाबुरामलाई फकाउँदै प्रचण्डले र प्रचण्डलाई फकाउँदै बाबुरामले आफ्ना स्वार्थ पार्टी मार्फत पूरा गर्दैआएका दुईजना अलग पात्र हुन् । त्यसकारण यस्ता महत्वकांक्षी मान्छेहरूले कहिले पार्टी पनि फुटाउँछन्, कहिले असाध्यै नयाँ उचाइबाट एकता गयौं भनेर एक अर्काका महत्वाकांक्षा सम्बोधन गरिदिन्छन् । अहिले मैले सुने अनुसार प्रचण्डले प्रधानमन्त्रीकी श्रीमतीलाई उपप्रधानमन्त्री दिइसक्नुभयो । बाबुराम जस्ता महत्वाकांक्षी मान्छेले त्यसै छोड्नुभन्दा श्रीमतीलाई उपप्रधानमन्त्री बनाएर छोड्न पनि सक्छन् ।
राष्ट्रलाई नै फाँसी चढाउन लागेका बेलामा चित्रबहादुरलाई कसैले फाँसीमा चढाउँछ भने मेरा लागि त्य� (05.07.2012)